Umthandazo Wokuba Aphelelwe Lithemba Lokulangazelela | Iiyure ezingama-24 kunye nokungaphumeleli
kuqala » Imithandazo » Umthandazo wokuba aphelelwe lithemba lokulangazelela
Umthandazo wokuba aphelelwe lithemba lokulangazelela
Kutshanje siye saba nesicelo somfundi owayefuna i umthandazo ukuba aphelelwe lithemba lokulangazelela kuye kwaye ufuna ukubuyela ezingalweni zakhe.
Isicelo sisifumene sinomdla kakhulu kwaye sinokukholisa uninzi lwenu.
Kwakungenxa yoku engqondweni apho sagqiba ekubeni sipapashe owona mthandazo ubalaseleyo esiwaziyo ngale njongo.
Ngumthandazo obhekiswa kwiSaint Cyprian ehlala isebenza ngaphantsi kweeyure ezingama-24.
Ukuba ufuna ukuyishiya intliziyo yalendoda izele kukulangazelela kwaye ibuya ikubambe nanamhlanje, thandaza nje umthandazo wethu!
Umthandazo wokuba aphelelwe lithemba lokulangazelela unamandla?
Usenokuba uye waphawula ukuba sikhankanye igama leSaint Cyprian ekuqaleni kweli nqaku.
Xa elo gama lisengozini, unokuqiniseka ukuba uya kuba nokufikelela kwinto eyomeleleyo nesebenza ngokwenene.
I-Saint Cyprian inceda abo bafuna uncedo, ingakumbi ukuba loo mntu ubandezelekile ngokwenene yaye uqhutywa luthando.
Ke ukuba uthandazela ukuba aphelelwe lithemba lokulangazelela okubhekiswa eSaint Cyprian ngendlela elungileyo, unokuqiniseka ukuba uya kulufumana lonke uncedo lwakhe.
Ukongeza, siya kufundisa kwakhona indlela yokwenza umnikelo kulo ngcwele.
Lo mnikelo uya kumenza afune ukusinceda ngakumbi, ngoko akukho ndlela yokusilela.
Ukuba ufuna ngokwenene ukuphelelwa lithemba nayiphi na indoda, nayiphi na inkwenkwe, umyeni okanye nje abantu obaziyo, kuya kufuneka uthandaze lo mthandazo ulandela imiyalelo yethu.
Ngoku sele uyibonile loo nto umthandazo uyasebenza nokuba ixabiseke ngokwenene, lifikile ixesha lokuyithandazela.
Okokuqala, sifuna ukunazisa ukuba unako kwaye ufanele ukuthandaza nanini na naphi na apho ufuna.
Isenokuba sekhaya okanye kude nekhaya, isenokuba imini okanye ebusuku, phakathi evekini okanye ngempelaveki.
Ayinamsebenzi imini, iyure okanye nantoni na enje, okubalulekileyo kukuthandaza ngokwemiyalelo yethu wenze umnikelo olungileyo ukuze isicelo sakho siphenduleke.
Ukuba ufuna ukutshintsha ubomi bakho kwaye ube nothando lwakho ezingalweni zakho jonga lo mthandazo ungezantsi.
Ingcwele yaseCyprian enamandla, ingcwele yeengcwele, inamandla amakhulu, wena unamandla okutshintsha nabani na kunye nayiphi na intliziyo, ndiyathandaza namhlanje ngokholo olukhulu kuwe ukuba ndikucele into engazange ibuzwe kuwe ngaphambili, kodwa mna kuphela yenze kuba ndiyidinga ngokwenene.
I-Saint Cyprian, yomelele kubo bonke abomeleleyo, ndiyanicela ukuba niphembelele intliziyo nengqondo (Igama lomntu) ukumenza aphelelwe lithemba ndimenze aphambane ngokundilangazelela, ukuze nostalgia ikhule ngaphakathi kuye angakwazi nokulawula.
Saint Cyprian, yenza ngaphakathi entliziyweni yakho, yenza ngaphakathi kwengqondo yakho, uyiguqule, uguqule iingcinga zakho nayo yonke into eyimfuneko ukuba uyishiye (Igama lomntu) Ndiyakukhumbula uphambene ngokupheleleyo!
Ukukukhumbula abangakwazi kuzibamba, oko akunciphi kwaye kudlule kuphela xa usecaleni kwam.
Ukutshintshiselana ngoncedo lwakho kunye nokumamela kwakho, Ngcwele eyomeleleyo, ndiyathembisa ukuba ndiza kukukhanyisa ikhandlela eli-1 elibomvu ngale mini kanye ebumnyameni.
Enkosi eNgcwele Cyprian, enkosi.
Ngoku ukuba uwubonile umthandazo, vele ubeke "igama lomntu" kunye negama lokuqala okanye igama elipheleleyo lomntu othandekayo.
Emva koko kuya kufuneka wenze umnikelo.
Ungayibona indlela yokwenza umnikelo kulo mthandazo wokuba aphelelwe lithemba lokukhumbula ikhaya elingezantsi.
Ukunikezela kwiSaint Cyprian
Ngoku ekubeni uwuthethile umthandazo, kufuneka wenze umnikelo ukuze uSaint Cyprian abone ukuba uyambulela.
Umnikelo uya kuba yikhandlela elibomvu.
Uyikhanyise nje ngala mini uthandaza ngayo, sekumnyama nje.
Ungathandaza emini, kodwa kuya kufuneka ukhanyise ikhandlela kuphela xa kurhatyela.
Ingaba ngaphakathi okanye ngaphandle kwendlu, into ebalulekileyo kukuba ikhanyisa iSão Cipriano kwaye unokholo kuyo yonke inkqubo.
Kukangaphi ndithandaza lomthandazo kwaye ndenze umnikelo?
Abantu abaninzi bacinga ukuba ngokuthandaza izihlandlo ezininzi baya kufumana uncedo olungakumbi, kodwa oku akusoloko kulungile.
Lo mthandazo weSaint Cyprian kufuneka wenziwe ubuninzi bexesha elinye ngemini, oku kungenxa yokuba unokwenza umnikelo ube-1 kuphela ngosuku.
Nanini na xa ethandaza kufuneka enze idini.
Thandaza namhlanje ukhanyise ikhandlela namhlanje, kodwa ukuba uyathandaza kwakhona ngomso kuya kufuneka ukhanyise elinye ikhandlela ngomso.
Ngokuqhelekileyo kwanele ukuthandaza kube kanye, njengoko kungaphezulu kokwaneleyo ukufumana uncedo oluxabisekileyo lwale ngcwele.
Umthandazo weNenekazi lethu laseDesterro
Umthandazo wokuthomalalisa intliziyo
Umthandazo wokubuyisela uthando namhlanje
Ngoku ekubeni esazi yonke into eyimfuneko ukwenza umthandazo usebenze kuye ukuze aphelelwe lithemba ngenxa yokukhumbula ikhaya, unamandla amakhulu ezandleni zakhe.
Sebenzisa umthandazo kuphela ngamaxesha esidingo kwaye ungaze ulibale ukubulela iSaint Cyprian ngokuza kuwe.
1 Umthandazo wokuba aphelelwe lithemba lokulangazelela unamandla?
2 Umthandazo wokuba aphelelwe lithemba lokulangazelela
2.1 Ukunikezela kwiSaint Cyprian
2.2 Kukangaphi ndithandaza lomthandazo kwaye ndenze umnikelo?